pamusoro 5 Best Cities kupedzera Christmas | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 5 Best Cities kupedzera Christmas
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba France, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Sweden, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 30/01/2021)
2018 Dzava apera, chinogona kureva chete kuti Krisimasi pedo! Vanhu vachiri haana kugadzirira kuti, asi nekuda Vafambi, zviri kumusoro nguva kuronga rwendo. Kana uri kutsvaka guta zvakanaka kupedza Christmas mu, tine iwe akafukidzwa.
Nyaya ino vachakupai ndandanda yakanaka maguta kupedza Christmas mu. Chii chimwe, isu ndigozoparidza pamusoro zvose zvinofadza zvaungaita ikoko, asi zvakakosha, sei kusvika maguta aya nechitima.
Amsterdam ane nzvimbo inokosha pamusoro pamazita ichi sezvo mabiko ikoko kutanga ipapa. Kutanga muna November, vanhu kubva kuAmsterdam vanotanga Krisimasi uye vose mumwe chando zviitiko.
The miziyamu Square pakati peguta kunochinja kupinda Christmas mumusha fairytale. Pano unogona kunakirwa mumwe chakanakisisa Christmas misika mu Europe. It kupfuura anokodzera Amsterdam somumwe yakanakisisa maguta kupedzera Krisimasi.
Amsterdam ichinyatsozivikanwa nezvivakwa zvayo naka uye migero vakawanda, asi guta anopa zvikuru. Unogona kunakidzwa chando Skating, Ferris vhiri Vatasvi, naka zvokudya zvakasiyana-siyana zvinwiwa, uye zvakawanda.
Unogonawo kunakidzwa Krisimasi kunyange pashure zuva kumigumo. Zuva rakatevera pashure Christmas, vanhu Amsterdam vanopemberera Boxing zuva.
Unogona kushanyira Amsterdam nechitima kubva zvinenge zvapo Europe. The nechepakati chiteshi richibatanidza kuti Paris, muFrankfurt, kweBrussels, London, Zurich, Berlin, Prague, uye zvakawanda. Pane kugara mitsetse nevakawanda uye vamwe vakawanda kumaguta muNetherlands. Saka kana uchida nomwoyo nezvitima European unogona kunakidzwa vanoverengeka Zvakanakisisa Cities Kushandisa Christmas mu 1 rwendo.
Best Cities Kushandisa Krisimasi, coldest Sarudza – Stockholm, Siwidheni
Ngazvive kuoma nechando, asi iwe unenge uchiri kuda kuti wasarudza kuva Stockholm for Christmas. Sweden ndiyo nyika kuti munguva chando mazororo nokuti yeSweden inodarika pachavo.
The guta pacharo unonwisa yakashongedzwa panguva yezororo, uye rinopa chinhu zvose zvemazuva ano uye zvetsika. Zviri kumusoro kusarudza somumwe yakanakisisa maguta vanakidzwe Krisimasi.
Kune mwenje kwose kwose uye Christmas misika mumigwagwa with hot chikafu uye zvinwiwa. Jy achipenga kwete kuedza chinonaka chichangobva kubikwa sinamoni pakati pemabhanzi kana gingerbreads mune rimwe guta racho vakawanda Mabheka! Sweden haadi kupa zvakawanda nenzira dzakasiyana-siyana zvokudya sarudzo, asi iwe unenge uchida chimwe chinhu kamwe iwe edza kuva nekinamoni bun rinopisa kofi.
Uyezve, uchaita kuwana mukana kushanyira rimwe kupfuura akanaka maguta ekare muEurope. Zvadaro unogona kumira achishamisika kutarisa migero siyana uye oma, rwizi channel, uye zvakawanda.
Unogona kuwana kusvika Stockholm nechitima kubva akawanda nzvimbo Europe sezvo muSweden kwakabatana kuburikidza Copenhagen. Mukuwedzera, iwe unenge uchida kutora Kudzidzisa vamwe kuchamhembe zvikamu munyika. Ndipo apo Northern Lights ndivo chakajeka uye yakaisvonaka.
Budapest, guta guru reHungary uye guta rayo rakanakisa, nderimwe yakanakisisa nzvimbo kupedza Krisimasi iri kuti akawanda zvikonzero. Guta iri paRwizi rweDanube uye inopa zvimwe yevedza chikepe Vatasvi. Unogona kuona zvinenge zvose zvivako enhoroondo kubva murwizi.
Uyezve, uchava kuona dzinokatyamadza Buda kasitoro uye Paramende Building. Kana zvinhu zvaungaita muchando, pane dzakawanda. Kubva akatasva kuti streetcars kuti Skating pamusoro Budapest Park chando Rink, nguva dzose mijenya zvinhu kuita pano. wo, usakanganwa kushanyira Christmas pamusika pana Vorosmarty Square uye Christmas akanaka panguva Basilica.
The huru njanji chiteshi kuti sokunge zvakaitika ngaatarire kubva Harry Potter bhuku iri pakati. It chinobatanidza Budapest kuti vakawanda mumaguta makuru muEurope uye zvakawanda. mamwe nhepfenyuro mbiri vane yakawanda chitima mitsetse, Kugadzirwa vachienda nokudzoka muBudapest mhepo.
Best Cities Kushandisa Krisimasi, rakasiyana Sarudza – Strasbourg, Furanzi
Strasbourg harisi chete chisarudzo chakanakisisa kupedza Krisimasi, asi zviri asiwo Christmas guru. Haugoni kurasikirwa kushanyira guta rino naka pa Christmas.
Strasbourg Anozvirumbidza-makore 400-okuberekwa Christmas misika, izvo zvakajeka anotsanangura kukosha Christmas muguta rino.
Uyezve, pane yakawanda nezvimwe zvinhu kuona uye kuita. Unogona kushanyira mi- Strasbourg Cathedral kana muhombe 18fung remakore Palais Rohan. Unogonawo kuona Ndokusaka guru Christmas muti pedyo Kupanana Village, kana famba muchitenderera guta centre. Chinhu bedzi ndicho chokwadi ndechokuti haumbofi kuwana kufinhikana muguta rino mashiripiti.
Strasbourg iri pakati Western Europe, riri pamuganhu Germany. nzvimbo yayo inoita kuti batanidza kuti vakawanda mumaguta Europe. Izvozvo zvinoreva kuti kuwana chitima guta richava nyore zvikuru.
Best Cities Kushandisa Krisimasi uye nzvimbo yakanakisisa yokurarama pa – Geneva, Siwizarendi
Mumwe yakanaka munzvimbo muEurope, kana kwete nyika, munguva yechando, ndiye Switzerland. Ndicho chikonzero Geneva, rimwe loveliest maguta kuSwitzerland, ndechimwe pamaguta yakanakisisa kunakidzwa Krisimasi.
The guta hunogara pamahombekombe Lake Geneva, uye kana chando anouya, yose nyanza ndiyo rinopenya. Zviuru vezviedza chipenye kubva kuzvitoro pedyo, nezvirugu zvamakwai, voruzhinji, zvivako, uye Christmas Kushongedza.
Chimwe chikonzero tiri vakanongazve Geneva kuti Best Cities Kushandisa Krisimasi Blog yakanga kuti vanoda Food kunofanira kufara sezvo guta racho pre-Christmas musika anopa zvokudya pamusoro nyika kubva zvose. Chii chimwe, unogona kuenda kunotenga Kufamba panguva Street, uye ipapo kushanyira dzimwe rinonyatsooneka varipo. izvi zvinosanganisira ari Palace of United Nations, St Pierre Cathedral, Water Jet, uye zvakawanda.
Pane nguva dzose nezvitima kubva mamwe maguta muSwitzerland akafanana Bern uye Zurich kuti anogona kutora kuti Geneva. zvisinei, panewo zvakawanda nezvitima kuenda uye kubva kuItaly, Furanzi, Jerimani, uye zvakawanda. Makwara ndibve kumaguta akaita wekuLausanne, Paris, Venice, Milan, Zvakanaka, Verona, uye zvakawanda. Mukuwedzera, musimboti njanji yemapurisa iri chaizvo peguta.
Lyon kuGeneva neTreni
Saka ipapo iwe nayo, Nyora zvakanakisisa maguta wakakwana kushandisa Krisimasi. Kana uchida mamwe mashoko pamusoro chitima Rokufambira kuti kubva kumaguta aya, inzwa wakasununguka Contact Save A Train chero nguva.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#Hangari #traveleurope europetravel Siwidheni mazano trainjourney Tranride nezvitima traintip chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano chitima rwendo famba travelamsterdam travelfrance travelswitzerland